Day: Ọktọba 14, 2019
Durak-bucak Ist N'agbata Km 321 + 000-321 + 150 Landslide Reclamation Work Construction Tender Dika nsonaazụ nke Stategbọ Raba steeti TCDD Adana 6. Directorate Mpaghara (TCDD) amachi 2019 / 432121 GCC 2.058.703,00 [More ...]
Ogwe Mpempe Paneldị Ogwe maka Ogwe
Artova, Bekdiğin, Suluova, Turhal na Yesilyurt Stations Panel Exdị Mbupụ mgbidi nke Walllọ Mpụga nke Turkish Republic TCDD 4. Ngalaba Na - ahụ Maka chazụta na Ndị Na - ahụ Maka Njikwa Akụ (TCDD) 2019 / 435071 [More ...]
Antalya mepere emepe, ndị agha Turkey nọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Euphrates na arụ ọrụ nke Peace Spring Mehmet supportik'e iji nyere ndị na-ahụ maka ụgbọ njem ọha na eze kwụwara ọkọlọtọ Turkish. Ntinye akwụkwọ nke Obodo Obodo enwetala ekele site n'aka Antalyalılar. [More ...]
EGO General Directorate nke Ankara Obodo ukwu na-akwadebe puku ụgbọ ala 554 na-eje ozi na njem ọha na eze n'obodo ukwu maka ọnọdụ oyi. 1 Disemba Tupu ebido iwu mmanye ngwa ga-amalite site na 2019 [More ...]
Mersin's Adnan Menderes n'ụsọ oké osimiri na-ewere ọnọdụ ya n'etiti ebe ụmụ amaala ga-enwe oge dị mma n'oge mgbụsị akwụkwọ yana oge niile. Citizensmụ amaala, Mersin Metropolitan Municipal Bicycle Rental Programme (KentBis) na 1 [More ...]
Nhazi okporo ụzọ na Eynerce Junction
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na "Eynerce Junction - Yavuz Sultan Selim Street Connection Road" iji mee ka ọ dị mfe ịbanye na mpaghara Dilovası district site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Eynerce Intersection [More ...]
Aro nke Rail Sistem maka Sakarya sitere na Academician si SAU
SAU ngalaba otu. Dr. Hakan Güler kwupụtara na Sakarya nwere nnukwu ikike maka sistemụ ụgbọ elu ma kwuo na "enwere ike ịbanye Trolleybus, metrobus, metro, light train, train train na tram na njem" [More ...]
Ntughari sitere na IMm ka ị mechaa Haydarpaşa na Sirkeci Station
İBB sonyere na ntinye aka nke TCDD zụtara ebe ụfọdụ na Haydarpaşa na Ọdụ Sirkeci. [More ...]
Derevenk Viaduct, nke ga-abụ otu n’ime ụzọ kachasị mkpa n ’obodo ahụ, njikọ okporo ụzọ abịala njedebe. Ndị otu Kayseri Metropolitan Municipality na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ ha. [More ...]
Mgbakọ njem nleta na Erciyes
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç zutere ndị na-ahụ maka njem na ndị na-etinye ego na ndị nnọchi anya nke ụlọ ọrụ na otu dị na Erciyes. Onye isi ala Memduh Büyükkılıç, site na ime njem nlegharị anya ruo n'ókè nke Kayseri kwesịrị inweta na njem [More ...]
Oge E-Kent na Publicgbọ njem Ọha na Izmir
A jụrụ ime ihe dị nro nke ESHOT maka ịrụ ọrụ usoro nnabata ego 5 n'ọnwa Ọgọst. Elọ ọrụ E-Kent, onye meriri nro ahụ, 7 ga-amalite ọrụ na Disemba dịka akụkọ si Sabah Ertan Gürcaner; Na Obodo İzmir [More ...]
Na 2007, ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala 44 na-eje ozi n'ahịrị metrobus Söğütlüçeşme-Beylikdüzü, nke mejupụtara 52 na-akwụsị ma nwee ogologo kilomita. Kedu nke nwere ebe dị mkpa na njem nke Istanbul na [More ...]
Evidea ga-eganye E-Commerce Success na Commerlọ Ahịa 110
Ezinaụlọ ngwaahịa na zụọ ahịa online, otu n'ime Turkey ji mma-mara shopping ikpo okwu Evidea, amalite anụ ahụ retailing. 6 Evidea, nke choro iru ebe a na-echekwa 110 na afọ, ga-eburu oganihu ya na e-azụmahịa na-ere ahịa. [More ...]